Su'aalaha - Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd.
Ma la hayaa alaab la habeeyay?
Haa, kaliya noo sheeg codsiyadaada, waanu kuu habeyn karnaa adiga.
Lacag dheeraad ah miyaan ku bixiyaa si loo habeeyay?
Waxay kuxirantahay hadaad rabto inaad badasho sida danab, cabirka baaritaanka, flange iwm waa si xor ah. Haddii aad rabto inaad beddesho qaybta muhiimka ah, ama aad ku darto xarumaha taageeraya, khadka isku imaatinka, iwm. Waxaan ka wada hadli karnaa khidmadaha u dhigma.
Miyaan ubaahanahay inaan badalo khadkeyga shaqeynaya hada markaan isticmaalo badeecadaada?
Maya, waxaan dooran doonnaa oo aan qaabeyn doonnaa badeecada sida ku qoran khadkaaga shaqada ee hadda.
Ma heli karaa muunad ka hor dalbashada?
Hubaal, tijaabooyin lacag bixin ah ayaa la heli karaa. Waxaad sidoo kale kireysan kartaa qalabka ultrasonic ee sheybaarka marka hore si aad u tijaabiso tayada iyo saameynta shaqada. Haddii ay daboosho baahiyahaaga, waad iibsan kartaa heerka warshadaha markaa, oo kirada kirada waxaa loo isticmaali karaa sidii bixinta alaabta.
Ka dib markii aan dalbanno ama kireyno muunad, sida loo tijaabiyo ayaa ugu macquulsan?
Kahor intaadan isticmaalin qalabka, waxaan ku weydiin doonaa baahiyahaaga iyo jawaabtaada.
Ka dib markaad isticmaasho qalabka, waxaan ku siin doonaa talaabooyinka tijaabada ah ee u dhigma iyo buuga qalabka.
Marka tijaabada la dhammeeyo, waxaan kaa caawin doonaa inaad ka soo saarto diiwaanada xogta ku habboon.
Our warshad waxay leedahay taariikh ku dhow 30 sano tan iyo markii la aasaasay.It waxay leedahay qiyaastii 100 shaqaale xirfadlayaal ah iyo in ka badan 15 xirfadlayaal R&D ah oo ku yaal Hangzhou, aad ayaa loo soo dhaweynayaa booqashada iyo sheekaysiga.
Bixinta & Gaarsiinta & Dammaanadda?
T / T, L / C aragga, Western Union, PayPal, Visa, Master Card.
7 maalmood oo shaqo gudahood badeecad caadi ah, 20 maalmood oo shaqo mid habeysan.
Badeecad kasta marka laga reebo waxyaabaha la adeegsado waxay leedahay dammaanad 2-sano ah.
Ma sameysaa oo kaliya iibisaa qalabka ultrasonic?
Waxaan nahay soo saare ku takhasusay soo saarida qalabka ultrasonic iyo xalalka warshadaha ee qalabka ultrasonic. Kaliya ma bixinno qalabka ultrasonic, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah qalabka la xiriira ee loo isticmaalo wax soo saarka warshadaha. Tusaale ahaan, blender. Taangiyada isku-dhafan ee birta ah, qalabka daaweynta biyaha, taangiga tijaabada dhalada, qalabka elektarooniga ah iyo wixii la mid ah.
Ma noqon karaa qaybiyahaaga?
Dabcan, aad baa loo soo dhoweynayaa. Waxaan ubaahanahay ganacsato firfircoon inay nagu soo biiraan si aan kor ugu qaadno sumadeena una ballaarinno inay qabsadaan suuqyo badan. Tayo marka hore.
Shahaadooyin noocee ah ayaad haysaa?
Wixii warshad, waxaan leenahay ISO; Wixii alaab ah, waxaan leenahay CE. Codsiga Soo-saarka, waxaan leenahay Patent-ka qaranka.
Waa maxay horumarkaaga?
Waxaan nahay soo saaraha ugu horreeya ee qalabka ultrasonic ee Shiinaha. Qalabka aasaasiga ah waa mid lagu kalsoonaan karo oo tayo leh kuna xoogan R&D.
Kahor dalabka: 10 sano iibinta iyo 30 sano injineerada waxay siinayaan talobixin xirfad leh oo ku saabsan alaabta, ha kuu hesho alaabada ugu haboon.
Inta lagu jiro amarka: Hawl-wadeen xirfad leh. Wixii horumar ah ayaa idin soo sheegi doona.
Amarka ka dib: 2 sano oo dammaanad qaad ah, taageero farsamo nololeed oo dhan.